partition ပေါင်းချင်လို့ပါ... - MYSTERY ZILLION
computer ၀ယ်တုန်းက partition က ၃ ပိုင်းခွဲပေးလိုက်တယ်ဗျ...အဲဒါအခု ၂ ပိုင်းပဲထားချင်တော့လို့...ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ....သိတဲ့သူများရှိရင်ဖြေပေးကြပါဦးဗျာ....အားကိုးပါတယ်.....
ကျွန်တော် အကြံပေးရရင်တော့ partition magic software သုံးလိုက်ပါလား...
ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ အခွေဆိုင်တွေမှာ partition magic ရှိလားလို့မေးပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်...
ဒါမှ မဟုတ် ဒီမှာ download ချလိုက်ပေါ့... 22 MB တောင် ရှိတယ်..
data ပျောက်မှာ မကြောက်ယင်တော့ ဖျက်ချပြီး အသစ်ပြန်လုပ်ပေါ့...:D
partition magic သုံးယင်တော့ သတိထားဗျ..(Backup...Backup!)\_:D/
Hard disk မှာ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိလို့ကတော့ restart round တာနဲ့ ကုန်ရောပဲ... ကျွန်တော် နှစ်ခေါက်ခံရဘူးလို့ ပြောပြတာ...:((
ဇူးလူးလို့ခေါ်ပါတယ်။ သိပ်ကြီးနားမလည်ပေမယ့် နည်းနည်းပြောခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
အခုပေါင်းချင်တဲ့ ပါတေးရှင်းက ဘယ်ပါတေးရှင်းတွေပါလဲ။ drive:C တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ drive: C+ E လို့ဘဲ ယူဆပါမယ်။ ကိုဆေတန်ပြောတဲ့ Partation Magic က သုံးလို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုနီယိုလွင်ပြောသလိုပါဘဲ။ Backup တော့ လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်။ အဲ Partation Magic ကိုဘဲသုံးသုံး အခုကျနော်ပြောမယ့်နည်းကိုဘဲသုံးသုံး ... Backup တော့ လုပ်ထားဖို့လိုပါမယ်။ အခုကျနော်ပြောမှာက ၀င်းဒိုးမှာပါပြီးသား Disk Management ကိုသုံးရမှာပါ။ အခြားဆော့၀ဲမလိုပါ။ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ...
(စောစောကပြောခဲ့သလိုဘဲ Backup လုပ်ထားပါ ... Backup လုပ်ထားပါ ... Backup လုပ်ထားပါ)
၁။ My Computer > Right Click > Management ကို ကလစ်လုပ်ပါ။
၂။ ပေါ်လာတဲ့ box ထဲက ဘယ်ဘက် (ဒု)အောက်ဆုံးမှာ Disk Management ကို ကလစ်လုပ်ပါ။ (ညာဘက်မှာ drives: C,D,E တွေ ပေါ်လာတာ တွေ့ပါမယ်။)
၃။ drive: C ကို Right Click > Delete Logical Drive လုပ်ပါ။ (free space တခု ရလာပါမယ်။)
၄။ drive:E ကို Right Click > Delete Logical Drive လုပ်ပါ။ (အရင်ရှိနေတဲ့ free space နဲ့ပေါင်းသွား ပါမယ်။)
၅။ အဲဒီ free space ကို Right Click > Format လုပ်ပါ။ (Format option မှာ quick ကို မရွေးမိပါစေနဲ့ ... quick ကို ရွေးထားရင် drive က ပုံမှန်မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။)
ခဏစောင့်ရပါမယ်။ အဲဒါပြီးရင်တော့ drives ၂ခုကို ပေါင်းပြီးဖြစ်သွားပါမယ်။ အဲဒီနောက်မှ Backup data တွေကို ပြန်ထည့်ပေါ့ဗျာ။
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...ထပ်မေးပါရစေ...အဲလိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် D နဲ့ E မှာ space များပြီး C နည်းနေမယ်ထင်တယ်နော်...အဲဒါ C နဲ့ D နှစ်ခုပဲထားပြီးတော့ space ကိုနှစ်ခုလုံး အညီအမျှထားချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး... C ကိုပါ format ချပြီး window ပြန်တင် ရမှာလား... အဲလိုမလုပ်ဘဲ C ထဲကိုဒီအတိုင်းပဲပေါင်းထည့်လို့ရတဲ့နည်းလေးများရှိလားမသိဘူး...
mrzay004 wrote: »
Partition Magic က disk space ကို လိုသလို ခွဲလို့ရပါတယ်.. မျှပြီးပဲ ထားထား... ဒါမှ မဟုတ် C: ကို များပြီး ကိုနည်းနည်း ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရပါတယ်.. Format လည်း ချစရာမလိုဘူး.. သူ့ဘာသာ သူ လုပ်သွားတယ်.. Backup တော့လုပ်ထားပေါ့... သေချာအောင်..
ကိုစေတန်ကြီးရေ...ကျေးဇူးလဲတင်တယ်..အားလဲနာတယ်....အဲဒီ software ကို download လုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်...cyber ဆိုင်တွေလဲကုန်ပြီ...ဆိုင်ကြောင့်လားဆိုပြီးပြောင်းပြီး download ဆွဲကြည့်တာလေ... မရပါဘူးဗျာ...ကယ်ပါ ကိုစေတန်....
၅၀၀ ပဲရှိပါတယ်.. :P
40 MB ကျော်တယ်ဗျ... နည်းတာမဟုတ်ဘူး..
ကိုယ့် Computer မှာ ကိုယ့် Hard Disk ပိုင်းတော့... 30% မှာ Error ပြတယ်..
Check Disk လုပ်တော့လည်း OK တယ်.. ဘာမှမဖြစ်ဘူး..
တခြားစက်မှာ Secondary နဲ့ သွား တပ်ပြီး ပိုင်းတော့ ရတယ်.. :106:
ဘာဖြစ်လို့လည်းဗျ... အရင်တုန်းက Hard Disk ကဆို Primary Hard Disk ဖြစ်လည်း ပိုင်းလို့ရပါတယ်..